‘एसएमजी’ हतियार चोरी प्रकरण : सैनिक अदालतमाथि प्रश्न ? यस्तो छ रहस्य — Imandarmedia.com
‘एसएमजी’ हतियार चोरी प्रकरण : सैनिक अदालतमाथि प्रश्न ? यस्तो छ रहस्य
काठमाडौँ । चितवन स्थित सेनाको कालीबहादुर गणबाट दुई वर्षअघि स्वचालित सट मेशिन गन (एसएमजी) हरायो । ०७५ पुस ३ मा ‘एसएमजी’ चोरी भएको थियो । हतियार चोरेको आरोपमा कालीबहादुर गणका अमलदार लव कुमार गुरुङ र जवान सरोज तामाङ २८ महिनादेखि थुनामा छन् ।
२०७६ वैशाख ६ मा समरी जनरल सैनिक अदालतले उदयपुर घर भएका गुरुङ र मोरङ सुन्दरहरैँचा घर भएका तामाङलाई पुर्पक्षमा पठाउने फैसला गरेको थियो । उनीहरु अहिले कारागार कार्यालय भरतपुरमा छन् । जङ्गी अड्डाबाट खटिएका सैनिक अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष (सहायक रथी) सहदेव खड्काले सैनिक ऐन–०६३ अनुसार लव कुमार गुरुङलाई १० वर्ष र सरोज तामाङलाई ७ वर्ष कैद सजाय गर्ने फैसला सुनाए ।
सेनाको आन्तरिक अनुसन्धान र समरी जनरल सैनिक अदालतले फैसला गरेको दुई वर्षपछि सैनिक जवान गंगाधर ढकालको साथमा सो हतियार भेटिएको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१७ स्थित सिमलडाँडा खेत नहरमा साउन ७ मा मृत फेला परेका सैनिक हुद्दा भरत गुरुङको हत्यामा सोही चोरी भनिएको हतियार प्रयोग भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । गुरुङलाई सैनिक जवान गंगाधर ढकालले गोली हानेर हत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ ।
महेन्द्रदल गण राष्ट्रिय निकुञ्ज शिवपुरी, टोखामा कार्यरत गंगाधर ढकालले हत्यामा स्वचालित सब मेशिन गन (एसएमजी) प्रयोग गरेको चितवनका एसपी ओम अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । गुरुङ पनि महेन्द्रदल गण राष्ट्रिय निकुञ्ज शिवपुरीमा कार्यरत थिए ।
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार हत्यामा बट नम्बर ‘केआर–१००७९२’ नम्बरको एसएमजी प्रयोग भएको छ । दुई वर्षअघि चोरी भएको हतियारको नम्बर पनि त्यही भएको एक जना सैनिक अधिकारीले दाबी गरेका छन् ।
दुई वर्षअघि एसएमजी फेला परेपछि सैनिक अदालतको आदेश र नेपाली सेनाले गरेको आन्तरिक अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको छ । नेपाली सेनाले त्यसबारे छानबिन गर्न जङ्गी अड्डाबाट विशेष टोली चितवन पठाएको छ । ‘छानबिनका गर्न विशेष टोली चितवन पठाएका छौँ,’ सैनिक प्रवक्ता (सहायक रथी) सन्तोष वल्लभ पौड्यालले भने–‘छानबिनबाट आउने रिपोर्टका आधारमा निर्णय गर्छौँ ।’
सैनिक प्रवक्ता पौड्यालले ‘एसएमजी’ हतियार प्रकरणका धेरै प्रश्न अनुत्तरित भएको बताए । पौड्यालले भने–‘छानबिनबाट हामी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्दै छौँ ।’
कसरी चोरियो ?
‘एसएमजी’ हतियारसहित पक्राउ परेका सैनिक जवान गंगाधर कालीबहादुर गणका होइनन् । महेन्द्रदल गणको पल्टन चितवनमा हुँदा उनी त्यहाँ कार्यरत थिए । झापाबाट कालीबहादुर गणको पल्टन चितवन सरेपछि महेन्द्रदल गण त्यहाँबाट शिवपुरीमा सरेको थियो । चितवनमा हुँदा ढकालले एरिया अध्ययन गरेर पछि हतियार चोरेको सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन् ।
हत्या आरोपी सैनिक जवान चितवनको कालिका नगरपालिका–२१ पदमपुरका हुन् । झ्यालको जाली उधारेर अङ्कुसेले तानेर हतियार चोरेको सैनिक अनुसन्धानबाट थाहा भएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको हिरासतमा रहेका ढकालले प्रहरीसँग ‘अङ्कुशेले तानेर एसएमजी चोरेको’ बयान दिएका छन् ।
हतियार चोरी भएको साँझ कालीबहादुर गणका अमलदार लव कुमार गुरुङ र जवान सरोज तामाङ दोहोरी साँझमा गएका थिए । गण नजिकै रहेको ‘फेमिली दोहोरी साँझ’मा गएको पुष्टि भएपछि सोही ‘क्लू’मा टेकेर समरी जनरल सैनिक अदालतले उनीहरूलाई जेल सजाय हुने फैसला गरेको थियो ।
यसै गरि, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१७ स्थित सिमलडाँडा खेत नहरमा साउन ७ मा नेपाली सेनाका हुद्धा भरत गुरुङको शव भेटियो । महेन्द्र दल गण राष्ट्रिय निकुञ्ज शिवपुरी, टोखामा कार्यरत भरतलाई सोही पल्टनमा कार्यरत जवान गंगाधर ढकालले गोली हानेर हत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ ।
चितवनका एसपी ओम अधिकारीका अनुसार हत्यामा नेपाली सेनासँग रहेको स्वचालित सट मेशिन गन (एसएमजी) प्रयोग गरिएको थियो । सैनिक जवान ढकालले सो हतियार कसरी चितवनसम्म पु&yen;याए ? प्रहरीले हतियारको सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको तर, अहिलेसम्म कुनै तथ्य खुल्न नसकेको जानकारी दिएको छ ।
हतियारबारे अनुसन्धान गर्दै छौँ, आरोपीले कहिले कता,कहिले कता भनेका छन्’ चितवनका एसपी अधिकारीले भने–‘अनुसन्धान पुरा हुँदासम्म केही आउला त्यसबारे अनुसन्धान टोलीले बुझिरहेको छ ।’
​हत्या आरोपी सैनिक जवान चितवनको कालिका नगरपालिका–२१ पदमपुरका हुन् । मृतक गुरुङ चाहिँ धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका स्थानीय हुन् । गत बिहीबार बिहान सिमलडाँडा खेत नहरमा शव भेटिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो ।
महेन्द्र दल गण राष्ट्रिय निकुञ्ज शिवपुरीबाट ६ दिनको बिदा लिएर दुवै जना चितवन गएका थिए । बिदामा रहेका सैनिकले पल्टनको कोतघरमा हतियार बुझाएर जानुपर्छ । तर, ढकालले आफू कार्यरत पल्टनबाटै हतियार लगेको भए त्यो सेनाभित्रको गम्भीर सुरक्षा त्रुटि हो ।
बिहीबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदा ढकालको साथमा एसएमजी फेला परेको थियो । सो हतियारबारे नेपाली सेनाले पनि आन्तरिक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
हामी पनि आन्तरिक अनुसन्धान गरिरहेका छौ’ सैनिक प्रवक्ता (सहायक रथी) सन्तोष वल्लभ पौडेलले रातोपाटीसँग भने–‘हतियार कसरी त्यहाँ (चितवन) पुग्यो भनेर हामी आन्तरिक तर्फबाट जवाफ खोजिरहेका छौँ ।’
सैनिक स्रोतका अनुसार केही समयअघि ब्यारेकबाट चोरी भएको वा आफ्नो जिम्माको एसएमजी ढकालले हत्यामा प्रयोग गरेका हुन् । नेपाल प्रहरीले सो एसएमजीको लट नम्बर सहित नेपाली सेनालाई पत्राचार गरेर विवरण मागेको छ ।
यसै गरि :
संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा जान लिइने नेपाल प्रहरीतर्फको आन्तरिक परीक्षाको प्रश्नपत्र ‘लिक’ भएको पुष्टि भएपछि दुई प्रहरीलाई बर्खास्त गर्दै परीक्षा रद्द गर्ने तयारी भएको छ ।
सो प्रकरणको छानबिनका लागि प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले सचिवालयका डीआईजी वसन्त लामाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएका थिए । समितिले गरेको छानबिनपछि प्रश्नपत्र लिक भएको पुष्टि भएको हो ।सो प्रकरणमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले तीन दर्जन प्रहरी कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा तानेकोमा डीएसपी रूपेश खड्कासहित ११ जना प्रहरी कर्मचारी दोषी देखिएपछि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने तयारी भएको छ ।
छानबिन समितिले अनुसन्धानको प्रतिवेदन तयार गरेर प्रहरी महानिरीक्षकलाई बुधबार बिहान बुझाउँदै छ । ‘अनुसन्धान सकियो, प्रश्नपत्र लिक भएको पुष्टि भएको छ, परीक्षा रद्द गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका छौं, केही प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि पनि सिफारिस गरेका छौं, लेयर लेयरमा कारबाही सिफारिस भएको छ,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले राजधानीसँग भने ।
ती प्रहरी अधिकारीका अनुसार दोषी प्रहरीलाई प्रहरी ऐनबमोजिम बर्खास्तीदेखि नसिहत र बढुवा रोक्कासम्मको कारबाही सिफारिस गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको हो । यो समाचारराजधानी दैनिकमा छ ।
यो पनि : महाकाली तुइन घटना : छानबिन टोलीद्वारा बैतडीमा छलफल, प्रतिवेदन बुझाउने समय सात दिन थप
महाकाली नदीमा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित टोलीले आज बैतडीमा छलफल गरेको छ । गृहमन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमका नेतृत्वमा गठित उक्त टोलीले बैतडीका सुरक्षा अधिकारीसँग छलफल गरेको हो । बेपत्ता रहेका जयसिंहको खोजतलास गर्ने विषयमा छलफल भएको बैतडीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिए ।
यही साउन १५ गते तुइनबाट महाकाली नदी तर्नेक्रममा धामी बेपत्ता भएका थिए । बेपत्ता भएको १२ दिनसम्म पनि उनको अवस्था अज्ञात रहेकाले खोजतलासमा तीव्रता दिने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । महाकाली नदी दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुर भएर बग्ने गर्दछ ।
टोलीले बैतडीको महाकाली नदी किनार झुलाघाट क्षेत्रमा खोजतलास गर्न पनि पुगेको थियो । उनले भने, “अन द स्पट गृहको टोली खोजी गर्न झुलाघाट क्षेत्रमा पुग्यो, भेट्टिएनन् ।” बैतडीमा दशरथचन्द नगरपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिका महाकाली नदीसँग जोडिएका छन् । भारतसँग बैतडीको ६१ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । उक्त क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको टोलीले नियमितरुपमा खोजी गर्ने भएको छ ।
छलफलपश्चात गृहको टोली बैतडीबाट फर्किएको छ । समितिले कञ्चनपुरसम्म महाकाली नदीसँग जोडिएका जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीसँग भेटघाट गर्ने बताइएको छ ।
भारतको बाटो भएर सदरमुकाम खलङ्गा आउने क्रममा व्यास गाउँपालिका–२ मालघाटमा तुइन तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काट्दा जयसिंह बेपत्ता भएका प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । बेपत्ता जयसिंहको खोजीका लागि दार्चुलामा नेपाल प्रहरीको प्राविधिक टोलीसँगै ड्रोन क्यामेरा प्रयोग गरिएको छ ।
सरकारले घटनाको छानबिनका लागि साउन १७ गते सहसचिव गौतम नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन टोलीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुरुषोत्तम कँडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशकुमार श्रेष्ठ र दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट जोशी रहेका छन् ।
साउन १९ गते दार्चुला पुगेको उक्त छानबिन टोलीले जिल्लामा रहँदा नेपाल–भारत दुवैतर्फबाट घटना भएको ठाउँको स्थलगत निरीक्षण गर्नुका साथै जिल्लास्थित राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, स्थानीयवासी र घटनाका प्रत्यक्षदर्शी तथा सुरक्षा निकायसँग छलफल एवं सूचना सङ्कलन गरेको थियो । टोलीले घटनास्थलको नेपाल–भारत दुवैतर्फ स्थलगत अवलोकन अध्ययन पनि गरेको थियो ।
टोलीले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । टोलीलाई घटनाको प्रतिवेदन बुझाउने समय यही साउन २७ सम्म रहेकोमा सात दिन थप गरिएको छ ।